ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ လုပ်သားများ: ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ သရုပ်မှန် (အောက်တိုဘာ ၂၀၀၇)
Posted by ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ လုပ်သားများ at 10:54 PM
ဒီအကြောင်းတွေကို..အမြဲ စိတ်ဝင်တစား ..သိနေပါတယ်။ ပြသာနာအားလုံးရဲ့ ရင်းမြစ်က..ဘာလဲဆိုတာလည်း..သိနေကြပါတယ်။ ရင်ငြိမ်းပန်းအဖွဲ့ကိုလည်း..ဂုဏ်ယူအားပေးပါတယ်။
ဇွဲရှိရှိ.. နည်းဗျူဟာ အပြည့်နဲ့..ဆက်လက်.လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ပဲ..အခုချိန်မှာ..ဆန္ဒပြုပေးပါရစေ။
Thamee Khin said...
we all know how the thai police, army, politicians are bad. prepare well, be calm and fight them back. the whole world is watching us now. you all will be fine.
Myitta Shin said...
'ဒီသတင်းကြားရတာစိတ်မကောင်းပါ။ အခုမှ ဒွမျိုးတွေလဲရှိသေးလား သိလာရတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေ မကောင်းလို့ ဒီလိုဖြစ်လာရတာပါ။
This is too bad,,
People are really suffer from unlawful Human Right ...
Home is also problem.. Away is also problem.. really really poor people...
The more i read this sort of touching articles, the more i want to break down the border lines of the countries all over the world. Humanity should be under same opportunities and law. But, it's still the hardest job to kill human's egos. In my dream, i am always waiting for the time when all the racist black walls breaking down. The globalization we are facing now is just fade one and the real one will come when the single people all over the world will be treated under same rights.
Burma needs to rebuild her diplomatic image carefully and consistently so that our country and citizens will not be abused by the corrupted police, hypocritic politicians, double standard officials of our neighbouring countries whose diplomatic forces are doing better jobs than us. One day, we may be able to provide our citizensawin-win situation for the host country and community, the indidvidual him or herself, the employer and the motherland Burma for this migrant labour force.
မြန်မာနိုင်င်္ငံမှပြည်သူများ DEMOCRACY မရရှိသေး ရခြင်းအကြောင်းရင်းများ
၁။ စစ်အစိုးရသည်ပြည်သူ့အတွင်းမှဖြစ်နေခြင်း[ကိုယ့်လူမျိုး] နှင့်ပြည်သူ့အားနဲချက်များက်ိုသိနေခြင်း၊
၂။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း နှင့်အတွင်းဋ္ဌ်လည်း ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဓါတ်အပြည့်အဝမရှိသေးခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့မှုအလုံအလောက်မရှိသေးခြင်း၊
၃။ ပြည်ပရောက် မြန်မာ့နိုင်င်္ငံရေးသမားများ၏ မြန်မာနိုင်င်္ငံကြီးနှင့်အလှမ်းကွာဝေးသည့်နှစ်ကြီးထွားလာခြင်း၊
၄။ စစ်အစိုးရ၏ အတွင်းပိုင်းပဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ[အတင်း]သတင်းများကိုသာ ရရှိပြီး စစ်တပ်၏ အားနဲချက်သတင်းအစစ်အမှန်ကိုအသေးစိတ်မရခြင်း၊
၅။ နိုင်င်္ငံရေးနှင့် စစ်တပ် အဖွဲ့အစည်းတိုင်းအတွင်းဋ္ဌ်ဆရာ၊တပည့်မွေးမှူများ ရှိနေသေးခြင်း၊
၆။ အခြေခံ ဆင်းရဲသားလူတန်းစား[လူများစု]၏ စားဝတ်နေရေးကိုအစိုးရကချုပ်ကိုင်ထားခြင်းနှင့့့််ဌင်းတို့မိသားစုများ၏သားသမီးများ[ပြည်တွင်း]
ဘဝခိုင်မာရန်အကြောင်းပြလှည့်ကွက်ဖြင့် DSA,DSTA,DSMA ၊စစ်သူနာပြု၊ အစရှိသည့်စစ်ကျောင်းကြီးများကိုအောင်မြင်စွာ ဆက်လက်ဖွင့်နေနိုင်သေးခြင်း၊
၇။ စစ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေး ကြိုးဆွဲ ကွက်များထဲတွင် တချို့နိုင်ငံရေးသမားများ ဆက်လက် ကနေဆဲများ ရှိနေသေးခြင်း၊
၈။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်းဋ္ဌ်လည်းသာတူညီမျှမှုနှင့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း အပြည့်အဝယုံကြည်မှုများမရှိသေးခြင်း၊
၉။ တော်လှန်ရေးတိုင်း၏အားနည်းချက်/အားသာချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပြည်သူလူထုကိုအောင်ပွဲခံစေမည့်ထိရောက်သည့် နည်းဗျူဟာသစ်များချမှတ်ပေးနိုင်မှုမရှိသေးခြင်း၊
၁၀။နိုင်ငံရေးသမားများတချို့၏ ပြည်သူ့သစွာခံနှင့် နိုင်ငံရေး ပါး မ ဝသေး ခြင်း၊
ကျွန်တော်တွေးမိသောအကြောငိးအရာလေးများ တချို့( ၂ )
၂။အူမတောင့် မှ သီလစောင့်မည် ဆိုသည့် စကားအတိုင်း အ ကျင့် စရိုက်ပျက် မှုများ ပိုမိုများပြား လာ ခြင်း၊
၃။ပညာတတ်များအတွက် ပြည်တွင်းဠ် နိုင်ငံခြား company များနည်းပါးလာခြင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပိုမို ပြောင်းရွေ့လာခြင်း၊
၄။အိမ်နီးခြင်း[ASEAN]နိုင်ငံများ၏ မြန်မာနိုင်ငံမှပညာတတ်များ ဦးနှောက် ကို ပိုမို ပြီး အ လွယ်တကူ ဖောက်စားနိုင်ခြင်း၊
၅။အလယ်အလတ်စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၏ အစိုးရ အကြိုက် လိုက်ပူးပေါင်းမှု ပိုမို များ လာခြင်း၊
၆။အများစုမှာအစိုးရ အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ် သက်ရာ ပတ်သက်ကြောင်းများကို အား ကိုးလာရရ်ျ တိုင်းပြည်သည် ပိုပြီး ဆင်းရဲလာခြင်း၊
၇။အလုပ်အကိုင် ဘဝ နောင် ရေး ကြပ် တည်းမှု တို့ကြောင့် ပညာမဲ့များအား [စွမ်းအားရှင်] အဖြစ် အစိုးရ မှအလွယ်တကူ ပိုမိုသွတ်သွင်းနိုင်ခြင်း၊
၈။သာသနဝန်ထမ်းများ ပိုမိုများပြား လာ ခြင်း၊
၉။နိုင်ငံခြားထုတ်ကုန်များစီးဆင်းမှု ကျပ်တည်း လာခြင်း ဖြင့် [ ASEAN, CHINA, RUSSIA,INDIA] တို့၏ မတန် တဆ အမြတ်ကြီး စားမှု ကို ပိုမို ခံ ရခြင်း၊
၁၀။စစ်အစိုးရ နှင့် နောက်လိုက်လူယုံ စီးပွါးရေး လုပ် ငန်းရှင် ကြီး များ၏ စီးပွါးရေး မ ကျ ဆုံး ခင် ၊ မြန်မာနိုင်င်္ငံမှဆင်းရဲသားလူတန်းစားအတွင်း ပြောင်းဆန်နှင့် သို့မဟုတ် ထမင်းတနပ်[ဟင်းမပါ] ကိုသာ စားသုံးရ သူ ပိုမိုများပြား လာ ခြင်း
နှင့် အခြေခံ ဆင်းရဲသားလူတန်းစား တို့၏ ဘဝ ကိုအရင်ဆုံး ပိတ်ဆို့ သကဲ့ သို့သာ ထိရောက်နေ ပါကြောင်း
ယနေ့ တရုတ်နိုင်ငံကြီး သည် ၆၃ သန်းကျော် ကွန်မြူနစ်ပါ တီဝင် များဖြင့် ဆက်လက် ကျင့်သုံး နေသော် လည်း မည်သည့် နိုင် ငံ ၏ စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့ မှု ကိုမှ မ ခံ ရ ဘဲ under the command economy with market economy, planned economy
များ ကျင့် သုံးကာ ဌင်းတို့ နိုင်ငံကြီးအတွင်း နည်းပညာများ တိုးတက်လာခါ ပညာတတ်များ ပြည်ပသို့ထွက်ခွါမှုကိုသွယ် ဝိုက် ချုပ်ကိုင်လာနိုင်ခြင်း၊
သို့ပါရ်ျ စစ်အစိုးရ၏ သေနတ် ကျည် ဆံနှင့် နိုင်င်္ငံရေးသမားတို့၏ပါးစပ် ကျည် ဆံများ အ ကြား ဖြစ်ပေါ်နေသော တိုင်းရင်းသားပြည်သူ့လူလှိုင်းစစ်ပွဲ ကြီးများကို ရပ်ဆိုင်းပြီးတိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တကယ် စဉ်းစားပြီးလုပ်ကိုင် ကြ လျင် ဖြင့်.....
khin min swer phyint
မြန်မာမလေးတွေကို ဒီလို ယုတ်မာခြင်းတွေဟာ အင်မတန်ကို ခံပြင်းဖို့ ကောင်းပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီ Website မှာ Cbox တွေ၊ Update သတင်းတွေကို တင်စေချင်ပါတယ်